Nilamina tamin’ny ankapobeny ny fitandroana ny filaminana nialoha sy nandritra ny fitsidihana Apostolika nataon’i Papa Fransoa teto Madagasikara ny 6 ka hatramin’ny 8 septambra 2019. Hentitra ny fitandroana ny filaminana, nihoatra ny tokony ho izy aza, hoy ny sasany.
Re ihany fa nisy nikasa hanakorontana saingy, na tsy sahy, na tsy nahavanona. Teny Ivato, ny alina nialohan'ny fahatongavan'i Papa Ray Masina dia nisy nanaparitaka fako teny amin’ny arabe. Nandray andraikitra avy hatrany ny Ben’ny tanàna dia voadio ara-potoana izany.
Naharenesana feo ihany koa teny Sabotsy Namehana fa hisy andian-jatovo hanakorontana ny alim-bavaka teny Soamandrakizay niarahan’ny Tanora tamin’i Papa Fransoa ny sabotsy 7 septambra 2019. Nandray fepetra hentitra (Dispositif de dissuasion) ny mpitandro ny filaminana dia voasoroka izany.
Mitohy ary hamafisina ny fitandroana ny filaminan'ireo mpino avy amin’ny faritra mitoby amin’ny paroasy samihafa eto an-drenivohitra mandram-piverenan’izy ireo any amin’ny toerana nihaviana avy, na eto an-drenivohitra na eny amin’ny lalam-pirenena dia mbola misy mpitandro ny filaminana hatramin’ny Alarobia.
Amin’ny Alakamisy, raha ny loharanom-baovao, vao miverina any amin’ny Toby nihaviana avy ireo mpitandro ny filaminana nantsoina hanatevin-daharana ireo namany teto an-drenivohitra.